Beach soccer : tafiditra ao anaty «Top 30 Mondial» ny Barea | NewsMada
Namoaka ny filaharan’ireo firenena, amin’ny taranja beach soccer, ny federasiona iraisam-pirenena (Fifa), nandritra ny taom-pilalaovana 2015 lasa iny. Tafiditra ao anatin’ireo ekipa 30 tsara indrindra eran’izao tontolo izao ny Barea de Madagascar. Laharana faha-22 mantsy no misy ny ekipam-pirenena malagasy. Tena nampisongadina an’i Madagasikara ny fahazoan’ny Barea de Madagascar ny tompondakan’i Afrika sy ny “Cosafa”. Hatreto, manana isa 596 ny Barea de Madagascar.
Marihina fa nikajiana ny namaritana ny filaharana ny zava-bitan’ny ekipa tao anatin’ny taom-pîlalaovana efatra, nanomboka ny taona 2012 ka hatramin’ny 2015.
Hatreto aloha, mbola, mitana ny laharana voalohany ry zareo Rosianina, izay manana isa 3500, arahin’i Portugal, tompondaka eran-tany farany, miaraka amin’ny isa 3 225 ary mamarana ny lampihazo ny Brezilianina, manana isa 2 400.
Ho an’i Afrika, mbola mitarika eo amin’ny filaharana hatrany i Sénégal, izay eo amin’ny laharana faha-15 eran-tany, arahin’i Maraoka, faha-19 ary Egypta, faha-21.
Firenena 107 no milalao ity taranja beach soccer ity, manerana izao tontolo izao.
Taranja efa voafehin’ny Malagasy tsara ny beach soccer ary efa manana rafitra mipetraka tsara ankehitriny. Misy fifaninanam-pirenena ary mahasarika mpilalao maro. Efa manana mpitsara iraisam-pirenena ihany koa ny Malagasy, izay efa nitantana lalao tamin’ny “Mondial”.